ဦးရဲၾကီၤး – Grab Love Story
by phyu May 7, 2021
ဆယ်အိမ်မှူးကိုတင့်ဆွေသည် လမ်းပြင်ဖို့အတွက် ရပ်ကွက်ထဲမှာ အလှူခံနေသည် ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ က တော်တော်များများ ထည့်လှူကြသည် ။ သူ့ကို လမ်းထဲက ချစ်ခင်ကြသည် ။ ကိုတင့်ဆွေ သည် လူတကာကို ကူညီဖို့ ဝန်မလေးဘူး ။ မျက်နှာ ပြုံးချိုပြီး တက်ကြွတဲ့ လူရွယ်တယောက်ပါ ။ ရပ်ကွက် ကောင်းဖို့ သူ အမြဲ လုပ်ကိုင်နေသည် ။ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကို အမှိုက်တွေ ရှင်းသည် ။ မြောင်းတွေကို ရှင်းလင်းသည် ။ မီးဘေး သူခိုးရန် ကင်းဖို့ညကင်းစောင့်တာတွေ တာဝန်ယူပေးသည် ။ “ ကိုတင့်ဆွေ..ဖိုး၀ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်ကို မကောက်ရသေးဘူးဗျ…..” လို့ သူ့ကို ကူညီနေတဲ့ လမ်းထဲက ကိုပေါက်ကပြောလိုက်လို့ ကိုတင့်ဆွေလည်း စာရင်းကို ကြည့်လိုက်သည် ။ ဖိုး၀ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်က ရပ်ရေးရွာရေးတွေမှာ အမြဲတမ်း လက်မနှေး မတွန့်တိုဘဲ ထည့်ကြလှူကြတာကို ကိုတင့်ဆွေသိထားသည် ။ “ အိုကေ..သွားကြတာပေါ့ဗျာ…..”လို့ ကိုတင့်ဆွေက ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ ဖိုးဝဒိန်ချဉ်ဆိုင်သည် ရန်ကုန်မြို့မှာ နံမည်ကြီး ဆိုင် ဖြစ်သည် ။ တန်းစီစောင့်ရသည် အထိ ရောင်းကောင်းသည် ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ဝေေ၀မာသည် ခပ်ချောချော တောင့်တောင့် ဖြူဖြူ မိန်းမတယောက် ဖြစ်သည် ။ စီးပွားတက်လို့ တန်ဖိုးကြီး ဇိမ်ခံကားတွေကို သူတို့မိသားစု စီးကြတာကို ကိုတင့်ဆွေ မြင်နေရသည် ။ ဒေါ်ဝေေ၀မာက နုတ်ချိုပေါင်းသင်းတတ်ပေမယ့် သူ့မောင် မိုက်ကယ် ဆိုတဲ့ လူက မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ငွေဂုဏ်မောက်ပြီး မောက်မာသည် လို့ ကိုတင့်ဆွေ ထင်သည် ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ချမ်းသာ အဆင်ပြေတဲ့ လူတွေက များများ ထည့်နိုင်တာမို့ သူတို့ဆိုင်ကို ဦးစားပေး အနေနဲ့အရင် သွားကောက်ဖို့ ကိုတင့်ဆွေက သဘောတူသည် ။ သူတို့ ထင်တဲ့အတိုင်း ဖိုးဝဒိန်ချဉ်ဆိုင်က လမ်းပြင်ဖို့အတွက် ငွေ သိန်းချီပြီး ထည့်လှူကြသည် ။
“ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ……” ကိုတင့်ဆွေလည်း ဆုတောင်းပေးမိရင်း နောက်တအိမ်ကို ဆက်ဖို့ ဖိုး၀ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်က ဒေါ်ဝေေ၀မာ ကို နုတ်ဆက်နေတုံး ဗြုံးကနဲ ရုတ်တရက် ဆိုင် အနောက်ဖက်က မိန်းကလေး တယောက် ပြေးထွက်လာသည် ။ ငိုယိုနေတဲ့မိန်းကလေးသည် မျက်နှာ တခုလုံး ဖူးယောင်ပြီး နှုတ်ခမ်းမှာလည်း သွေးတွေ စို့နေသည် ။ “ ဟဲ့..ဟဲ့..ကောင်မလေး..ဘာဖြစ်တာလဲ…….” ဒေါ်ဝေေ၀မာ မျက်နှာ တအား ပျက်ထွက်သွားသည် ။ “ ဟဲ့ မိသုန်….အထဲ ဝင်…..ဝင်…ဘာလို့ အရှေ့ကို ထွက်လာတာလဲ..” လို့ ငေါက်လိုက်သည် ။ ကောင်မလေးရဲ့ ခေါင်းကိုလည်း ဘတ်ကနဲ ရိုက်လိုက်သည် ။ “ အား..အမလေး….မရိုက်ပါနဲ့..ကျမ နာလှပါပြီ …. ” ကောင်မလေးက အော်ငိုသည် ။ ကိုတင့်ဆွေ ဟတ်ထိသွားသည် ။ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်..နူရာဝဲစွဲ…..လဲရာ သူခိုးထောင်း… ကိုယ့်ထက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေကို နှိပ်စက်တာ မကောင်းဘူး ။ ကိုတင့်ဆွေ မနေသာတော့ ။ “ ဒေါ်ဝေေ၀မာ…မရိုက်ပါနဲ့ဗျာ…ကလေးမ ဘာဖြစ်လာလဲ..နင့်ကို ဘယ်သူက ဘာလုပ်လဲ……”လို့ သူ ကောင်မလေးကို မေးလိုက်သည် ။ ကောင်မလေးက “ အီးဟီး..ဦးမိုက်က သမီးကို တအားရိုက်တယ်…ခြေထောက်နဲ့လည်း ကန်တယ်…..”လို့ အော်တိုင်သည် ။ ဦးမိုက် ဆိုတာက ဒေါ်ဝေေ၀မာရဲ့ မောင် မိုက်ကယ်ကို ဆိုလိုတယ် ဆိုတာကို ကိုတင့်ဆွေ သဘောပေါက်သည်။ “ ကဲ ဒေါ်ဝေေ၀မာ…ဦးမိုက်က ရိုက်တယ်.ကန်တယ် ဆိုပါလား…..ဒီလိုတွေ မဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ..အိမ်အကူတွေကို ဒီလိုလုပ်တာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး..ဘယ်မှာလဲ..ကိုမိုက်ကယ်….ခေါ်ဗျာ…….” လို့ ခပ်မာမာ ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဝေေ၀မာရဲ့ မျက်နှာသည် နီရဲတွတ်နေသည် ။ ဆယ်အိမ်မှူး ရှေ့မှာမှ မိသုန်က ဒရာမာလုပ်နေသည် ဆိုတော့ ကွိုင်ကတော့ တက်ပြီ ။ အကျယ်အကျယ် မဖြစ်ခင် ကြည့်ရှင်းမှ တော်မည် ။ “ မိုက်ကယ်..မိုက်ကယ်..မောင်လေး…..” လို့ အိမ်ထဲကို လှမ်း ခေါ်လိုက်သည်။ မိုက်ကယ် ထွက်လာသည် ။ မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး ။
သူ့မျက်နှာက ခပ်တင်းတင်း ။ “ ဘာလဲဗျ..ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲ….” ကိုတင့်ဆွေက “ အိမ်အကူ ကောင်မလေးက ခင်ဗျားက ရိုက်တယ် ကန်တယ်လို့ ငိုယိုတိုင်နေတယ်..သူ့မှာလည်း ဖူးယောင်ပေါက်ပြဲတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေနဲ့……ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲဗျာ…..” လို့ မေးသည် ။ မိုက်ကယ်က ခင်တင်းတင်းဘဲ..“ ဟာ..ဒါတွေက ခင်ဗျားတို့ ဝင်ပါစရာ မဟုတ်ပါဘူး..သူတို့ကို ငွေပေးပြီး ခိုင်းထား တာ..အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်လို့ ကျုပ်တို့က ဆုံးမနေရတာ..သူတို့ဖက်က နေမနေနဲ့…” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ကိုတင့်ဆွေလည်း မိုက်ကယ်ကို ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်သည် ။ “ ရုံးမှာ ဆွေးနွေးရအောင်ဗျာ….” မိုက်ကယ်က “ ကျုပ် မအားဘူးဗျ..ချိန်းထားတာတွေ ရှိသေးတယ်…..” လို့ ပြင်းဆန်သည် ။ ကိုတင့်ဆွေလည်း သူတို့ဆိုင် အရှေ့ကို ထွက်ပြီး ရဲစခန်းကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ။ မိသုန် သည် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ မိသားစု အခြေအနေကြောင့် ရန်ကုန်ကို သွားပြီး ရရာ အလုပ်ကို လုပ်ရမည် လို့ အကိုကြီးက ပြောသည် ။ တတ်နိုင်ရင်တော့ ဘယ်သွားချင်မလဲ..ဘယ်လုပ်ချင်မလဲ…..။ အဖေက ဆေးရုံမှာ ။ အမေက အိမ်မှာ အိပ်ရထဲ ဘုန်းဘုန်းလဲ ။ အကိုကြီးက ကဇော်သမား ။ တချိန်လုံး မူးနေသည် ။ မွဲပြာကျနေတဲ့ နင်းပြား ဘဝမှာ မိသုန်လို ကလေးသာသာ အပျိုပေါက်မလည်း ကျောင်းတက် စာသင်လို့ မရတော့ ။ အလုပ်လုပ်ရမည် ။ အိမ်အကူပွဲစား ဒေါ်အားမ အိမ်ကို ရောက်သွားသည် ။ ဒေါ်အားမက လူပေါ်လူချင်း အညွန့်ခူးစားသည် ဆိုတဲ့ လူအတန်းအစားထဲက တယောက် ။ အိမ်အကူလိုတဲ့ အိမ်တွေကို လူသွင်းတဲ့အလုပ် အိမ်အကူ ပွဲစား အလုပ်ကို လုပ်ပြီး ရွှေတွဲလဲ ငွေတွဲလဲ ကြီးပွားနေတဲ့ မိန်းမ တယောက် ။ ဒေါ်အားမ က မိသုန်ကို ကြည့်ပြီး..“ နင်က ပိန်ညောင်ညောင်…ချိနဲ့နဲ့ ဆိုတော့ အိမ်ကြီးရှင်တွေက ကြိုက်မယ် မထင်ဘူး ….အင်းလေ..ငါ နင့်ကို ကြိုးစားပြီး အလုပ်အမြန်ရဖို့ လုပ်ပေးမယ်…နင်က ငါ့ကို ကြည့်ပေးပေါ့…” လို့ပြောသည် ။ ဒေါ်အားမရဲ့ ယောကျ်ား သွန်နီက မိသုန်ရဲ့ အကိုကြီးလိုဘဲ ငမူး တယောက် ဖြစ်သည် ။
မိသုန်လည်း ရေချိုးတဲ့အခါ ရေလဲထမိန် မရှိလို့ လုံခြုံတယ်လည်း ထင်လို့ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်နဲ့ ချိုးလိုက်တာ ဝုန်းဆို တံခါး ပွင့်လာပြီး ဒေါ်အားမ ယောကျ်ား သွန်နီကြီး အထဲကို ဝင်လာသည် ။ မိသုန် ကြောက်လိုက်တာ အရမ်း ။ လက်ကလေးတွေကို ရင်ဘတ်က ဖွံ့ဖြိုးစ ရင်သားတွေ အပေါ်နဲ့ ပေါင်တန်သွယ်သွယ်တွေ ကြားနေရာကို အုပ်ကာရင်း ကြောက်လန့်တကြား ငိုယိုမိသည် ။ သွန်နီက “ ဟိတ် ငိုမနေနဲ့….ဘာလဲ ..ကျက်သရေမရှိဘူးဟာ…..အင်း….နင်က နှံပြီစုတ်လေး ဆိုပေမယ့်….အမွေး အတောင် စုံပြီဘဲ…..အင်း……မဆိုးဘူး….” ဆိုပြီး မိသုန်ရဲ့ တင်ပါးတွေကို စူးစိုက်ကြည့်သည် ။ ဒေါ်အားမ ရုတ်တရက် ရောက်လာလို့ သွန်နီ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်သွားသည် ။ ဒေါ်အားမရဲ့ ညစ်စုတ်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကလော်တုတ်သံ ဆဲသံတွေ မိုးမွှန်သွားသည် ။ “ ခွေးကောင်…နင် အဲ့ဟာမလေးကို လိုးဖို့ ကြံတာ မဟုတ်လား..သေနာကောင် မြွေပွေးကိုက်..မအေလိုး…..ဟဲ့ ဟိုကောင်မကလည်း အလိုးခံချင်လို့..စောက်ပတ်ယားလို့ ဖင်တုံးလုံးနဲ့ ရေချိုးပြတာလား..ဖါသည်မရဲ့……” မိသုန်လည်း အိမ်က ထွက်လာပြီး ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံု ကြမ်းကြမ်း တခုပါ ။ အိမ်ပြန်ပြေးချင်စိတ်တွေ များပေမယ့် အကိုကြီးက ဒေါ်အားမဆီက ငွေကြိုထုတ်ထားတဲ့အတွက် ပြန်လို့ မရဘူး ။ ပထမဆုံး လုပ်အားခကို ဒေါ်အားမကို ပြန်ဆပ်ရမည် တဲ့ ။ ဒေါ်အားမလည်း မိသုန်ကို အိမ်မှာ မထားချင်ဘူး ။ သူ့ယောကျ်ား သွန်နီ အလစ်မှာ တက်လိုးမှာစိုးလို့ ။ ဒေါ်အားမလည်း ဖုန်းတလုံးနဲ့ လူမှာထားတဲ့ အိမ်တွေကို ဖုန်းတွေ ခေါ်သည် ။ မိသုန်ကို မြန်မြန် အိမ်က ထုတ်ပစ်ရမည် ဆိုပြီး ကမန်းကတန်း ထ လုပ်နေတာပါ ။ “ မိသုန်…..နင့်အတွက် အိမ် ရပြီ …..ကဲ…နင့် အထုပ် သွားယူ..ဒို့ တက်စီနဲ့ သွားကြမယ်….” မိသုန် ဖိုး၀ ဒိန်ချဉ်ဆိုင် က ဒေါ်ဝေေ၀မာရဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားသည် ။
ဒေါ်ဝေေ၀မာ က မိသုန်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ပြီး “ မဆိုးပါဘူး…..ဒါပေမယ့် ပိန်ကပ်ကပ်လေးနဲ့ အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ပါ့မလား..” လို့ မျက်နှာပုတ်ပုတ်နဲ့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်အားမ က “ ဟဲ့ မိသုန်…..ပြောလိုက်လေ..နင် အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်ပါမယ် လို့…” လို့ ဟောက်လိုက်လို့ မိသုန်လည်း ပြာပြာသလဲ “ ကျမ..အားရှိပါတယ်..အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ်ပါမယ်…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ “ မိုက်ကယ်…မောင်လေး…..ခဏ လာကြည့်…” ဒေါ်ဝေေ၀မာ က အိမ်အတွင်းဖက်ကို လှမ်းအော်ပြောလိုက်သည် ။ သူ့မောင် ဆိုတဲ့ မိုက်ကယ် အပြင်ကို ထွက်လာသည် ။ အသက် ၂၀လောက် လို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ ပါးးဖေါင်းဖေါင်း ခပ်ပုပု တုတ်တုတ် မိုက်ကယ်သည် မိသုန်ကို သေသေချာချာ စူးစိုက်ကြည့်သည် ။ “ အင်း…စမ်းခိုင်းကြည့်တာပေါ့…..မမ..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်ဝေေ၀မာက “ ဒေါ်အားမ..စမ်းကြည့်မယ်…ကလန်ကဆန် လုပ်ရင် ကျမ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်….ဟုတ်ပြီလား…” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်အားမ က “ စိတ်ချပါ အမ…..သူ့ကို အမတို့ သဘောကျကြမှာပါ….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။မိသုန်သည် ရောက်တဲ့နေ့က စပြီး ဒေါ်ဝေေ၀မာတို့ မိုက်ကယ်တို့ ခိုင်းတာ မှန်သမျှကို ပြေးပြေးလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်ဝေေ၀မာနဲ့ မိုက်ကယ်တို့ရဲ့ ကျေနပ်မှုကို လုံး၀ မရခဲ့ပါဘူး ။ ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်၇က်နဲ့ ဆင်းရဲသူလေး မိသုန် အပေါ် သဲကြီးမဲကြီး အပြစ်တင် နှိပ်စက်ချင်နေကြတာကို နားမလည်နိုင်အောင်ပါဘဲ ။ ဒေါ်ဝေေ၀မာက အိမ်အကူပွဲစား ဒေါ်အားမကို ဖုန်းဆက်ပြီး မိသုန်ဟာ ပျင်းသည်နုံသည် အသည်..ခိုင်းမကောင်း..လို့ တိုင်လို့ ဒေါ်အားမလည်း “ ဒီလောက် ပြောထားတဲ့ကြားက ဒီ အုတ်ကြား မြက်ပေါက် ကောင်မစုတ်က လူစကား နားမလည်တော့ ခက်တာဘဲ..ပါးနားသာ ချထည့်လိုက်..လို့ ပြောတာနဲ့ဒေါ်ဝေေ၀မာနဲ့ မိုက်ကယ်လည်း ဒီအချိန်က စပြီး မိသုန်အပေါ် လက်နဲ့ခြေနဲ့ပါ ကန်ကျောက် ရိုက်နှက်လာကြသည် ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဒေါ်ဝေေ၀မာ တည အပြင်သွားနေခိုက် မိုက်ကယ်သည် မိသုန်ရဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲကို ဗြုံးဆိုရောက်လာပြီး မိသုန်ကို သူ့နာရီကို ခိုးသည်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုတာပါဘဲ ။
မိသုန်လည်း ငိုပြီး..“ ကျမ မခိုးပါဘူး…ဦးမိုက်ရယ်…ကျမ တကယ် မယူပါဘူး…..” လို့ ပြောလည်း မရဘဲ မိသုန်ရဲ့အိပ်ရာနဲ့ လွယ်အိတ်ကို လှန်လှော ရှာသည် ။ ဘယ်လို ဖြစ်ရလဲမသိတော့ဘူး ။ မိသုန်လည်း မခိုးဘဲနဲ့ မိသုန်ရဲ့ မွေ့ရာလေး အောက်မှာ ဦးမိုက်ရဲ့နာရီကို တွေ့သွားခဲ့သည် ။ မိသုန်လည်း တဆတ်ဆတ် တုန်ခါအောင်ဘဲ ကြောက်သွားသည် ။ “ကျမ….ကျမ…..မခိုး…….” “ လက်ပူးလက်ကြပ် မိနေတာတောင် နင်က ဘူးကွယ်နေသလား..မုန်လာဥ လုပ်နေလား…မိသုန်….ကဲ…နင့်ကို ရဲ လက်အပ်မယ်……နင် ထောင်ထဲကို သွားရမယ်……” “ ဟာ…မပို့…..မပို့ပါနဲ့..ကျမ ကြောက်တယ်….ကျမ ရှက်တယ်…..ဦးမိုက်ရယ်…..မလုပ်ပါနဲ့….တောင်းပန်ပါတယ်..” “ ထ…ထစမ်း….” ဦးမိုက်သည် မိသုန်ကို တဖန်းဖန်းနဲ့ ပါးတွေ ရိုက်သည် ။ မိသုန် ဖင်ကိုလည်း လက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက်သည် ။ “ တောက်..သူခိုးမ…..နင့်ကို ရဲစခန်း ပို့မယ်….” “ အီးဟီး..မပို့ပါနဲ့ ဦးမိုက်….ကျမ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်….” ဆင်းရဲလွန်းလို့ အိမ်အကူ လုပ်စားပါတယ်…နှိပ်စက်တဲ့လူတွေနဲ့ တိုးနေသည် ။ ဘဝသည် ခါးသီးလှသည် ။ မိုက်ကယ်က မိသုန်ကို ပါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် ဘယ်ပြန်ညာပြန် ရိုက်ရင်း မိသုန် ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေကို ချွတ်ခိုင်းသည် ။ မိသုန်က မချွတ်တော့ သူကိုယ်တိုင် ဆွဲချွတ်သည် ။ အိပ်ခန်းလေးထဲက မီးရောင် ဝါကျင်ကျင်အောက်မှာ မိသုန် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားရသည် ။ ဦးမိုက်က မိသုန်ကို ကုတင်လေးပေါ် ပက်လက် လှန် အိပ်ခိုင်းပြီး သေသေချာချာ ကြည့်ရင်း..မိသုန်….နင် ငါ ဆုံးမ တာကို ခံမလား…ရဲတွေဆီ အချုပ်ခန်းထဲရောက်ပြီး ရဲတွေ ရိုက်တာ ခံမလား….” လို့ မေးတော့ မိသုန်လည်း တ အားကြောက်ပြီး….“ ဦးမိုက် ဆုံးမတာကိုဘဲ ခံပါမယ်….” လို့ ပြောမိသည် ။ ဦးမိုက်က မိသုန်ရဲ့ ဖွံ့ထွားခါစ ရင်သားတွေကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်သလို “ ပေါင်တွေ ကားလိုက်စမ်း…” လို့ ပြော သည် ။ မိသုန်က ပေါင်ကားဖို့ ရှက်နေတဲ့အခါ သူ့လက်ကြီးနဲ့ မိသုန်ရဲ့ ပေါင်တွေကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို သူ့လက်ညှိုးကြီးနဲ့ စုန်ချီဆန်ချီ ပွတ်သည် ။
“ အို…..” မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သူ့လက်ညှိုးကြီးက သေသေချာချာ စမ်းပွတ်နေသည် ။ အ……အ…..ဟင့်… လေးဖက်ထောက်လိုက်စမ်း….ဟို..ဟို…ကျမ….ကျမ…..ခိုင်းတာလုပ်….ရဲလက် အပ်လိုက်ရမလား…..” “ ဖျန်း …” သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ ဖင်ကို တအား လွှဲရိုက်လိုက်တာ ခံလိုက်ရလို့ ကြောက်ပြီး သူ ခိုင်းတာကို အမြန် လုပ်လိုက် သည် ။ လေးဖက်ထောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သူက “ မိသုန်..နင်က အဝတ် ဝတ်ထားရင် ပိန်ကပ်ကပ်လို့ ထင်ရ ပေမယ့် အခုလို နစ်ကက် ချွတ်လိုက်တော့ ဖင်တွေ ရင်တွေက အတော်ကောင်းသား…..” လို့ ပြောလိုက်ပြီး သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ မိသုန်ရဲ့ ဖင်အနောက်ဖက်ကနေ စောက်ဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်လိုက်ပါသည် ..။ မိသုန်လည်း ယောကျ်ားတယောက်ရဲ့ အခုလို အကိုင် မခံဘူးတာမို့ တအားကို စိတ်တွေ တုန်လှုပ်ပြီး ကြောက်မိသည် ။ သူ့လက်ချောင်းတွေက တရွရွနဲ့ မိသုန်ရဲ့ အကွဲကြောင်းကို ပွတ်နေသည် ။ ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်း ထရသည် ။ “ နင် ငါခိုင်းတာကို လုပ်မလား….ဒါဆို ရဲလက် မအပ်ဘူး . .” “ ဟုတ်…..ဟုတ်…….လုပ်ပါမယ်…..” “ ဟင်..နင်..စောက်ရည်တွေ ရွှဲလာပါလား……နင်လည်း စိတ်လာနေပြီဘဲ….” စောက်ဖုတ်ကို ဒီလောက် ဆွနေ ပွတ်နေတော့လည်း အရည်တွေက စိုရွှဲလို့ လာတာပေါ့ ။ ဦးမိုက်သည် မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးနှိုက်သည် ။ “ အို…..အာ………အာ……အင်း……..ဦး…ဦးမိုက်………” မိသုန်လည်း မျက်ရည်လည်း တတောက်တောက်ကျ စောက်ရည်လည်း စိုစိုရွှဲနေရတဲ့ ဘဝပါဘဲ ။ မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားတဲ့ မိသုန်သည် မျက်နှာကို ပူနွေးနွေးဟာကြီးတခု ထိကပ်လိုက်တာကို ခံစားလိုက်ရလို့ မျက်လုံးတွေ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လုံးပတ်တုတ်တုတ် ညိုမဲမဲ ယောကျ်ား လီးတန်ချောင်းကြီး ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ တအား လန့်သွားတဲ့အချိန် ဦးမိုက်က “ နင် ငါ့ဟာကို စုတ်ပေးရမယ်…ဒါဆိုရင် ငါ နင့်အပြစ် တွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်…..ဘယ်လိုလဲ..မိသုန်….စုတ်မယ် မဟုတ်လား…..” လို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် သူခိုင်း တာကို လုပ်ရတော့မည် ဆိုတာကို သိနေတဲ့ မိသုန်လည်း တခြား ရွေးစရာ လမ်း မရှိတော့တာကြောင့် သူ့ကို ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်ပါသည် ။
“ အေး..ဒီလိုမှပေါ့…ကဲ ပါးစပ်ဟစမ်း…..” မိသုန်လည်း တကယ်တမ်း လုပ်ဖို့ကျတော့ နှေးကန်လေးကန်နေသည် ။ ဖတ်ကနဲ သူက မိသုန်ပါးတဖက်ကို ရိုက်လိုက်သည် ။ “ ဟလေ…..ပါးစပ်…ကောင်မ…..ဘာငိုင်နေတာလဲ…..ငတုံးမ……..” မိသုန် ပါးစပ်ဟလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ဒစ်လုံးကြီး ပါးစပ်ထဲကို အတင်းကြီး သွတ်လိုက်တာ ခံလိုက်ရသည် ။ ဒီအချိန်မှာ သူ့လက်ညှိုးကြီးကလည်း စောက်ဖုတ်ထဲကို တစွပ်စွပ်နဲ့ ထိုးနေသည် ။ “ အိုး….အု……အု…..အ…….” “ စုတ်..စုတ်…နင့်သွားတွေနဲ့ မခြစ်မိရအောင် သတိထား..ပါးစပ်ကို အသားကုန်ဟ……စောက်ကောင်မ…..” မိသုန် ယောကျ်ားလီးကို စစုတ်ဖူးသွားရသည် ။ ဦးမိုက်ရဲ့ လီးငံကျိကျိကြီးကို သူသင်ပြတဲ့အတိုင်း စုတ်ပေးရသည်။ “ ကောင်းလား..လီးစုတ်လို့….” ပါးစပ်ထဲ လီးကြီး ရှိနေလို့ ခေါင်းညှိမ့်ပြမိသည် ။ မိသုန်ရဲ့ မျက်ရည်တွေ တသွင်သွင် စီးကျနေသည် ။ “ အံမယ်…စောက်ကောင်မက မျက်ရည် တစမ်းစမ်းနဲ့ အမူက ပိုနေသေး…..စုတ်..စုတ်စမ်း..သွက်သွက်..လျာနဲ့ ကလိပေး..ထိုးပေး…..လုပ်..လုပ်….အား……အား…….အိုး…အဲလို…အဲလို…….အား……ကောင်းတယ်…….အား…….အိုး..” အကြာကြီး စုတ်ခိုင်း အပြီး သူက မိသုန်ကို ပက်လက် ပြန်လှန် ခိုင်းပြီး ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားခိုင်းပြန်သည် ။ မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဘေးတဖက်တချက်ကို ဖြဲကြည့်ပြီး ဆတ်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်ရင်း အတွင်းသား နီရဲရဲတွေကို လျာကြီးနဲ့ ပလပ် ဆို ယက်ပစ်လိုက်ပါသည် ။ “ အိုး…..” သူ့လျာကြီးက မိသုန်ရဲ့ စောက်စိကို ပွတ်တိုက်သွားတာကြောင့် တအား တုန်ခါသွားရသည် ။ လီးစုတ်ဖူးရုံမ ကဘဲ စောက်ဖုတ်လည်း အယက်ခံဘူးသွားရသည် ။ မိသုန်ကို ကာမ အတွေ့အကြုံတွေ စပြီး သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးမိုက် ရဲ့ စောက်ဖုတ် တပြတ်ပြတ် ယက်နေတာက ခွေးတွေ အစာစားနေသလိုကြီး။ ဦးမိုက် စောက်ဖုတ်ယက်တာကို မိသုန် အလူးအလဲ ခံနေရသည် ။ သူ့လက်တွေက မိသုန်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုလည်း ဆုပ်ညှစ်နေသည် ။ ဒီအချိန်မှာ ကားဆိုက်သံကို ကြားလိုက်ကြရသည် ။ ဦးမိုက်လည်း ခေါင်းထောင်သွားပြီး..“… မမ..ပြန်လာပြီ….” လို့ ပြောလိုက်ရင်း မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည် ။ “ မိသုန်…..ဒီအကြောင်း နင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော်……နင်ဘဲ အချုပ်ခန်းထဲ ရောက်သွားမှာ….” လို့ ပြောပြီး ဦးမိုက် မိသုန်ရဲ့ အခန်းလေးထဲက ထွက်သွားလိုက်ပါသည် ။မိသုန်လည်း ဒေါ်ဝေေ၀မာ ပြန်ရောက်လာလို့ သူခိုင်းတာတွေကို ဆက်တိုက် ဆိုသလို လုပ်ကိုင်ပေးရတော့သည် ။
ဒေါ်ဝေေ၀မာရဲ့ ရှေ့မှာ အမူအရာ မပျက်အောင် ကြိုးစား ဟန်ဆောင်ကာ နေရသည် ။ ဘဝမှာ ပထမဆုံး ကာမ အတွေ့အကြုံကို ရလိုက်တာမို့ ညမှာ တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့ မပျော်ဘူး ။ ယောကျ်ား လီးတန်ကို စုတ်ဖူးသွားရသလို စောက်ဖုတ် ယက်တာကိုလည်း ခံဖူးသွားရသည် ။ တနေ့နေ့မှာတော့ ဦးမိုက် သည် စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးနဲ့ထိုးသွင်းလိမ့်မည် လို့လည်း မိသုန် သိနေသည် ။ ဒီလို အတွေးတွေ တွေးတိုင်း မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်က အရည်တွေ တအား ထွက်သည် ။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် ဒီလို အရည်စိုရွှဲတာဟာ လီးကို တောင့်တလိုလားလို့ဘဲလားလို့လည်း ထင်မိသည် ။ ဦးမိုက်သည် သူ့အမရဲ့ ကွယ်ရာမှာ မိသုန်ကို ဆွဲဆွဲပြီး နို့နယ်..စောက်ပတ်နှိုက် လုပ်သည် ။ တခါတလေ သူ့ပု ဆိုးကို မတင်ပြီး တောင်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို စုတ်ခိုင်းတတ်သည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မိသုန်သည် လီးစုတ်တတ် လာသည် ။ ဒီနေ့လည်း ဒေါ်ဝေေ၀မာ တယောက် ဒိန်ချဉ်ဆိုင်မှာ အလုပ်များနေတဲ့အချိန် ဦးမိုက်က “ မိသုန်..ငါ့ အဝတ်ညစ် တွေ လျော်ဖို့ လာယူစမ်း..” လို့ အော်ခေါ်လိုက်လို့ မိသုန်လည်း သူ့အခန်းထဲကို ပြေးသွားလိုက်တဲ့အခါ အကြံသ မားကြီး ဦးမိုက်က မိသုန်ကို ဆွဲဖက်ပြီး ပထမ နို့နှစ်လုံးကို သူ့လက်ကြီးတွေနဲ့ ရေရေလည်လည် နယ်သည် ။ ကိုင်သည် ။ ပြီးတော့ မိသုန် စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်သည် ။ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကို သူ့လက်ညှိုးကြီးက အစုန် အဆန် လိုင်းဆွဲနေသည် ။ “ အိုး…ဦးမိုက်…အိုး……..မိသုန်…မိသုန်………” မိသုန် စောက်ဖုတ် အရည်တွေ စိုစိုရွှဲ လာသည် ။ ဦးမိုက်ရဲ့ နောက် လက်တဖက်က မိသုန်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ကျကျ နန နယ်ဖတ်နေသည် ။ ဆုပ်ညှစ်နေသည် ။ “ ကဲ မိသုန်…ငါ့လီးကို စုတ်ပေး…” မိသုန်လည်း သူ့အရှေ့ ဒူးထောက်ပြီး သူ့လီးတုတ်ကြီးကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်ငုံလိုက်ရသည် ။ ငံကျိကျိ ဒစ်ကားကြီး ကို တပြွတ်ပြွတ် စုတ်ပေးနေတဲ့အချိန် “ လီးကို တဆုံးထိ ငုံလေ…” လို့ ငေါက်လိုက်တာကို ခံရသည် ။ သူ့စိတ် ကြိုက် စုတ်ပေးရသည် ။ သုတ်ရည်တွေ ဖျောကနဲ ဖျောကနဲ မိသုန် ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထည့်ရင်း သူ ပြီးသွားသည် ။ သူ့လီးထိပ်ပေါက်လေးမှာ ရှိနေတဲ့ လရည်တွေကို ပြောင်စင်သွားအောင် သူက ယက်ခိုင်းသေးသည် ။ ဦးမိုက်သည် နေ့တိုင်းလိုဘဲ ကြုံသလို မိသုန်ကို အနိုင်ကျင့်သည် ။ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ သူ့စအိုပေါက်ကို လျာနဲ့ ယက်ခိုင်းတာဘဲ ။ မယက်ချင်ပါဘူး..ရွံတယ် လို့ မိသုန် က ပြော လိုက်တဲ့အခါ မိသုန်ပါးကို ပိတ်ရိုက်သည် ။ တအားတော့ မဟုတ် ။
ခပ်ဆတ်ဆတ်ပေါ့ ။ သူ့ဖင်ပေါက်ကို လျာနဲ့ ယက်လိုက် ထိုးဆွလိုက် လုပ်ပေးပြီးတဲ့နောက် မိသုန်ကို သူ တက်လိုးသည် ။ မိသုန် စောက်ဖုတ်ထဲကို ဆီလူးထားတဲ့ သူ့လီးတုတ်ကြီးကို ထိုးသွင်းသည် ။ တခါမှ လီး မဝင်ဘူးသေးတဲ့ မိသုန်ရဲ့ အပျိုစင် စောက်ဖုတ်ကို သူ ဖွင့်သည် ။ လိုးသည် ။ မိသုန် နာလို့ အော်တော့ သူ့လက်သီးကြီးနဲ့ ရွယ်ပြီး “ အသံမထွက်နဲ့…” လို့ ငေါက်သည် ။ ဦးမိုက် ရက်ရက်စက်စက် လိုးထည့်တာကြောင့် မိသုန် စောက်ဖုတ်က သွေးထွက်သလို မိသုန် လမ်းလျောက်တဲ့အခါ တအား နာသည် ။ ကွတတ ဖြစ်သည် ။ မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဦးမိုက်ရဲ့ လီး လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သွင်းလို့ မရဘူး ။ ဦးမိုက်က ဆီဘူးလေးထဲက ဆီ တွေကို သူ့လီးတခုလုံးကို လိမ်းကျံသုတ်သလို မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း သုတ်သည် ။ မိသုန်လည်း စောက်ဖုတ်ကွဲသွားမှာ ကြောက်ပြီး မလုပ်ဖို့ ငိုယိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့် မရဘူး ။ ပေါင်တန်တွေကို တအားကုန် ဖြဲကားခိုင်းပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လီးကြီးကို ထည့်သည် ။ ဖိသွင်းသည် ။ မိသုန်လည်း နာလို့ အော်တော့ မိသုန် ပါးစပ်ကို သူ လက်နဲ့ လာပိတ်သည် ။ “ မအော်နဲ့….တိတ်စမ်း ” လို့လည်း ဟောက်သည် ။ လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်ထဲကို တထစ်ထစ် တဆင့်ပြီး တဆင့် ရောက်လာသည် ။ သူက လုပ်နေကျ ဖြစ်လိမ့်မည် ။ တခါထဲ တအား သွင်းမထည့်ဘဲ ထိုးလိုက် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက် ပြန်ထိုးလိုက် ရှေ့တိုးနောက် ဆုတ်နဲ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ လုပ်သည် ။ ဆီတွေကလည်း လိမ်းထားတာကြောင့် ကြာကြာကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သူ့လီးကြီးသည် တဇိဇိနဲ့ မိသုန်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဝင်ထွက်လာနိုင်သည် ။ မိသုန်လည်း ဦးမိုက် တက်လိုးလိုက်လို့ ယောကျ်ား လီးနဲ့ အလိုးခံဘူးသွားရပြီ ။ မိသုန် အပျို မဟုတ်တော့ ။ အလိုမတူဘဲ ခံလိုက်ရတာဘဲ ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ နာကျင် ခံစားရသည် ။ ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ မိသုန်တို့ ဘသ အခြေ အနေကိုလည်း စိတ်ပျက်သည် ။ စိတ်နာကျည်းသည် ။ ဒါပေမယ့် ဘာတတ်နိုင်မလဲ ။ ဒေါ်ဝေေ၀မာက “ ဟဲ့ ကောင်မ..နင် ဘာဖြစ်နေလဲ ..” လို့ မေးသည် ။ သေသေချာချာတော့ မစစ်ဆေးဘူး ။ သူက ဆိုင်အလုပ်နဲ့ အလုပ်များနေတာကိုး ။ ဦးမိုက်ကတော့ အောင်ပွဲခံတာပေါ့ ။ ပါကင်လေးကို ဖွင့်ပစ်လိုက်သည် လို့ သူ့မိတ်ဆွေတွေဆီကို ဖုန်းဆက်ဆက် ပြီး ကြွားနေတာကို မိသုန် ကြားနေရသည် ။ အဲဒီည မိသုန် စောက်ဖုတ်က နာကျင်နေဆဲ အချိန် ဦးမိုက် မိသုန် အခန်းကို ရောက်ချလာသည် ။ “ ဟင်..ဦးမိုက်….ဘာ…ဘာ…..လုပ်မလို့လဲဟင်…..” “ နင့်ပါးစပ်ပိတ်ထား…..နင် ဘာမှ အာမခံနဲ့…ငါ နင့်ကို ထပ်လိုးမလို့…..” “ မိသုန်…တအား နာနေတယ်…..ဦးမိုက်…မလုပ်ပါနဲ့……” “ ဟာ..ထပ်ထပ် လုပ်လိုက်မှ နင် အသားကျသွားမှာ..ခံနိုင်လာမှာ…..တခါလိုးပြီး ရပ်လိုက်လို့ မရဘူး…..” မိသုန်ကို ပေါင်ကားခိုင်းပြီး တက်ခွရင်း လိုးသည် ။ ဒစ်ကားကြီးသည် မိသုန်ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း အ တင်းကြီး ထိုးဝင်လာသည် ။ “ အိုး …ဦးမိုက်..ဖြည်းဖြည်း…..” “ ရှူး….နင့်ပါးစပ် ပိတ်ထား…..” ဦးမိုက်ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ဘွပ်ဘွပ် ဘွပ် ဆိုပြီး ဆက်တိုက် ဝင်ထွက်နေပြီ ။
“ အိ…အီး……အိ…..အိ…..” သူ့လဥကြီးတွေက တွဲလောင်းကြီးမို့ ဆောင့်လိုက်တိုင်း တဘပ်ဘပ်နဲ့ လာရိုက်နေကြသည် ။ “ အိုး…..အိုး…အိုး……” မိသုန်လည်း သူ့အတွက် ပေါင်တွေ ဖြဲကားပေးပြီး မျက်စိစုံမှိတ်ထားလိုက်တော့သည် ။ ဆယ်အိမ်မှူးကိုတင့်ဆွေသည် မိုက်ကယ်ရဲ့ ရိုင်းပျမှုတွေကြောင့် မိုက်ကယ်နဲ့ စကား ဆက်ပြောရင် သူနဲ့ ရန် ဖြစ်ကြတော့မည်လို့ သိလိုက်တာကြောင့် ဆက်မပြောတော့ဘဲ လမ်းပေါ်ကို ထွက်ရပ်လိုက်ပြီး ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။ ရဲစခန်းမှူးသည် ကိုတင့်ဆွေနဲ့ ရပ်ကွက် အလုပ်တွေ မှုခင်းကာကွယ်ရေး အလုပ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ထားဖူးလို့ သိနေကြသည်မို့ စခန်းမှူးဦးတိုးလုံရှိန် ဆီကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။ ဖြစ်ပျက်တာတွေကို ဦးတိုးလုံရှိန်ကို တိုင်လိုက်သည် ။ ဦးတိုးလုံရှိန်က သူ အခုဘဲ ဖိုးဝဒိန်ချဉ်ဆိုင်ကို လာခဲ့မည် လို့ ပြန်ပြောရင်း ဖုန်းချသွားသည် ။စခန်းမှူးတိုးလုံရှိန် ရောက်လာသည် ။ ဆယ်အိမ်မှူးကိုတင့်ဆွေက ဖြစ်ပျက်တာကို စခန်းမှူးကို ရှင်းပြသည် ။ စခန်းမှူးက ဒေါ်ဝေေ၀မာ မိုက်ကယ်နဲ့ အိမ်အကူကောင်မလေး မိသုန်တို့ကို စစ်မေးဖို့ ရဲစခန်းကို ခေါ်သွားသည် ။ ကိုတင့်ဆွေကိုတော့ လိုအပ်ရင် ခေါ်လိုက်မည်လို့ ပြောပြီး ခေါ်မသွားဘူး ။ ရဲစခန်းကို ရောက်တော့ စခန်းမှူးတိုးလုံရှိန်သည် ဒေါ်ဝေေ၀မာနဲ့ မိုက်ကယ်တို့ကို သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ ကော်ဖီနဲ့မုန့် ကျွေးထားပြီး အိမ်အကူကောင်မလေး မိသုန်ကို အခန်းလေးတခန်းထဲကို ခေါ်သွားပြီး ထိုင်ခိုင်းသည် ။ မီးလုံး ဝါ ကျင်ကျင်လေးဘဲ ထွန်းထားတဲ့ စတိုခန်းဟောင်းလေး ဖြစ်သည် ။ “ ကောင်မလေး….မေးတာကို မှန်မှန်ဖြေ…..နင် ထောင်ထဲ သွားချင်လား….” မိသုန်က ခေါင်းလေးငုံ့ထားသည် ။ ငါ ဘာမှလည်း မလုပ်ဘဲ ထောင်ထဲသွားမလားချည်း မေးနေကြတယ်…..လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးနေသည် ။ “ နင့်နံမည် ပြော…..” “ သုန်နီ …. ” “ နင်နဲ့ မိုက်ကယ်နဲ့ ဘယ်လို ဖြစ်ကြတာလဲ…..ဆယ်အိမ်မှူး ပြောတာ နင့်ကို မိုက်ကယ်က ရိုက်တယ်ဆို….” “ ဟုတ်….” “ ဘာလို့ ရိုက်တာလဲ…..” “ သူက အတင်းကြမ်းတာကို ကျမ..ကျမ…က မခံလို့….” “ ဘာ…ကြမ်းတယ်….ဟုတ်လား…..ဘာကြမ်းတာလဲ…..” “ ကျမကို ဟိုဒင်း လုပ်တာ…..” “ ဟေ….ဟားဟားဟား….ဘာလဲဟ……ဟိုဒင်း ဆိုတာ…..” မိသုန်က မဖြေဘူး ။
စခန်းမှူးကမိသုန် အနားကို ကပ်လာသည် ။ “ လိုးတာလား….” မိသုန် ခေါင်းညှိမ့်ပြသည် ။ “ ဟေ…..နင့်ကို သူလိုးတာ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်လား . .” မိသုန်က “ မဟုတ်ဘူး..သူ လုပ်နေတာ သုံးလေးကြိမ်လောက် ရှိပြီ…..ခုဟာက တမျိုး….”လို့ ပြောလိုက်သည် ။ “ ဟင်…..ဘာလဲ….ဘာတမျိုးလဲ… ခါတိုင်းလို အရှေ့ကို မဟုတ်ဘူး….အနောက်ကို…အနောက်ကို အတင်းလုပ်တာ.. အိုး…….ပေါက်ပြီ….နင့် ဖင်စအိုပေါက်ကို ချတာပေါ့..ဟုတ်လား… ဟုတ်… ဟာ….ခွေးသား..မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ..ဒီလောက် နုနုငယ်ငယ် မိန်းကလေးတယောက်ကို ဖင်လိုးတယ် ဆိုတာ” စခန်းမှူးတိုးလုံရှိန်သည် စုတ်တသပ်သပ်နဲ့ မိသုန်ရဲ့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်လိုက်သည် ။သူ…သူ…..ဒီကောင်…နင့်ဖင်ပေါက်ထဲကို လိုးဖြစ်သွားလား……မိသုန်ရဲ့ မျက်လုံးရွဲကြီးတွေထဲက မျက်ရည်ပေါက်ကြီးတွေ ထွက်ကျလာသည် ။အင်း..ဟုတ်…ဟင့်ဟင့်…..ဟင့်…အို……မိသုန်……..ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေကွာ……” စခန်းမှူးတိုးလုံရှိန်က မိသုန်ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အနားက စားပွဲဟောင်းလေးပေါ်ကို ပွေ့ချီ တင်လိုက်သည် ။ “ ကလေးရယ်….ဦး စိတ်မကောင်းဘူးကွာ…..” တိုးလုံရှိန်ရဲ့ လက်တဖက်က မိသုန်ရဲ့ ကျောလေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည် ။ မိသုန်ရဲ့ ဘလောက်စ် အနွမ်းလေးထဲမှာ ဘာ ရင်စည်း အခုအခံမှာ မပါဘူးဆိုတာကို တိုးလုံရှိန် စမ်းမိနေသည်။ “ မိုက်ကယ်….မိုက်ကယ်…တော်တော် ဆိုးတဲ့ကောင်…..အင်း……..ခက်တယ်…ဆုံးမရအုံးမယ်…..” မိသုန်လည်း ဒီလူကြီး ဖက်တာကို မကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်ကို ဖမ်းနိုင်တဲ့ ရဲကြီးမို့ မပြောရဲဘူး ။ တိုးလုံရှိန်သည် မိသုန်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်ထားလိုက်သည် ။ အိစက်တဲ့ မိသုန်ရဲ့ ရင်သားစိုင် နှစ်လုံးက သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ထိကပ်နေသည် ။ မိသုန်သည် တိုးလုံရှိန်ရဲ့ ဘောင်းဘီထဲက မာမာကြီးတခုက သူ့ပေါင်တန်တွေ ကို လာထိတွေ့နေတာကို သတိထားလိုက်မိသည် ။ ဟင်..ဒါ……ဒါ…….ဒါကြီးက သူ့ဟိုဒင်းကြီးပါလား…..ဟယ်…… မာမာကြီး….ဖြစ်နေတယ်….ဒါ….ဒါဆို သူ..သူ..စိတ်လာနေတာပေါ့…အို…….။ အို….ငါ့ဘဝက ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး..ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး..ဆိုတဲ့ စကားလို ဖြစ်နေပါလား….။
တိုးလုံရှိန်သည် ကျောပြင်လေးကို ပွတ်ပေးနေရာက လက်ဖဝါးကြီးသည် အောက်ဖက်ကို တရွေ့ရွေ့ ဆင်းလာနေ ပြီး မကြာခင် မိသုန်ရဲ့ ဖင်တုံးတွေကို ကိုင်တွယ်လသည် ။ “ အို…….လွှတ်ပါ..ဦးရယ်…မလုပ်ပါနဲ့….”လို့ ပြောပေမယ့် ဒီတိုးလုံရှိန် ဆိုတဲ့ လူကြီးက မိသုန်ရဲ့ စကားကို နား မထောင်ပါဘူး ။ ဖင်တွေကို ဖွဖွပွတ်ရာက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်နယ်လာသည် ။ “ အို….လွှတ်..လွှတ်ပါ….” “ မိသုန်….အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်…ငါ့ကို နင် ပေးလိုးလိုက်..ငါ့လီးကို စုတ်ပေး…….ငါ နင့်ကို အိမ်ပြန်လွှတ်မယ်…..” တိုးလုံရှိန်ရဲ့ လက်က မိသုန် ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကြားထဲကို ရောက်သွားသည် ။ လက်ချောင်းတွေက တခုခုကို ရှာ ဖွေနေသလို ပြေးလွှားနေသည် ။ စမ်းမိတာက အကွဲကြောင်း ။ မိသုန် တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ တိုးလုံရှိန်ရဲ့ လက်ညှိုးတုတ်တုတ်ကြီးက စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကို ပွတ်နေလို့ ။ သူ့နောက် လက်တဖက်ကလည်း မိသုန်ရဲ့ နို့်တလုံးကို ကိုင်လိုက် ဆုပ်လိုက် ပွတ်လိုက် ။ “ လာ…..မိုက်ကယ်က ပြောတယ်….နင်က လီးစုတ်တတ်နေပြီတဲ့..ငါ့လီးကို စုတ်ပေးစမ်းဟာ……” မိသုန် အခက်တွေ့နေပြီ ။ သူက ဘောင်းဘီ ခါးပတ်ကို ဖြုတ် ဇစ်ကို ဆွဲချနေသည် ။ မိသုန်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတုံး လီးတန် ညိုညိုတုတ်တုတ်ကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီး မိသုန်ပါးစပ်ကို ထိပ် ဖူးနီညိုညိုကြီးက လာထိသည် ။ “ အို့….” “ နင့်ပါးစပ်လေးကို ဟလိုက်…လီးကို စုတ်လိုက်…..လိမ္မာပါတယ်..မိသုန်ရယ်….အားလုံး အိုကေမှာ စိုပြေအောင် လီးစုတ်ပေးလိုက်…..” လို့ သူက ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း ပြောလိုက်သည် ။ မိသုန်ရဲ့ ပါးစပ်လေး အလိုလို ဟပေးမိသွားသည် ။ ဒစ်လုံးကြီး လျောကနဲ ပါးစပ်ထဲကို ဝင်လာသည် ။ သူ့ဆီက “ အင်း…….” ဆိုတဲ့ အသံကြီး ကြားလိုက်ရသည် ။ မိသုန် လီးနောက်တချောင်းကို စုတ်ဖူးသွားရပြန်ပြီ ။ ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ စတိုခန်းဟောင်းလေး ထဲမှာ ကြားနေရသည် ။
တိုးလုံရှိန်ကြီးရဲ့ တဟင်းဟင်း ညည်းသံတွေရော ။ “ ကောင်းတယ်…..အိုးဟင်း……..အင်း…ကောင်းတယ်……..စုတ်..စုတ်……..အား…..အား……အား……ညည်းတော်တယ်….စုတ်..စုတ်… ..အမလေး……အိုး…….ကောင်းတယ်…….ကောင်းတယ်……မိသုန်…….” မိသုန်လည်း ပေါက်တဲ့နဖူး မထူးဘူး…..ဆိုပြီး တိုးလုံးရှိန်ရဲ့ လီးကြီးကို အပီအပြင် စုတ်ပေးလိုက်သည် ။ ဝက်ဖြစ်နေမှ ချေးကြောက် မနေတော့ပါဘူး ။ ဦးမိုက် သင်ပေးထားလို့ မိသုန်လည်း လီးတော်တော် စုတ်တတ်နေပြီ ။ တိုးလုံရှိန်လည်း ဆင်းရဲသူ အားနည်းသူဖက်က မရပ်တည်တဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် နှိပ်စက်လိုက်ချင်သေးသည် ။ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက် ဆိုတဲ့ စကားလိုပါဘဲ ။ တိုးလုံရှိန် သည် တကယ်တော့ ဖိုး၀ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်နဲ့က တအား ခင်မင် ပတ်သက်နေခဲ့သည် ။ ဆယ်အိမ်မှူး ရှေ့မှာ အတည်ပေါက်နဲ့ အရေးယူတဲ့ပုံ ပြလိုက်ပြီး မိုက်ကယ်တို့ မောင်နှမကို ကားပေါ်တင်ခဲ့ပြီး ရဲစခန်းကို ခေါ်ပြလိုက်သည် ။ တကယ်တော့ တိုးလုံရှိန်သည် ချစားနေတဲ့ အရာရှိတယောက် ။ မိသုန်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ့လီးကြီး ဖိဖိညှောင့်ပြီး အင်းအဲ….နဲ့ အရသာခံနေသည် ။ သူ့လက်တွေက မိသုန်ရဲ့ ဆူ ဖြိုးလုံးနေတဲ့ နို့နှစ်လုံး အပေါ်ကို ရောက်သွားသည် ။ နို့အုံတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်သည် ။ နယ် သည် ။ ပြီးတော့ မိသုန်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ် ရှိသမျှကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်သည် ။ မိသုန်သည် ကိုယ်တုံးလုံးလေး နဲ့ တိုးလုံရှိန်ရဲ့ လီးကြီးကို စုတ်ပေးနေရသည် ။ ပါးစပ်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေလည်း ထူပူကုန်ပြီ ။ “ အီး…..ကောင်းတယ်ဟာ…စုတ်…စုတ်…..” “ ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်…..ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်………” “ အား……..အား…….အား………” မိသုန် ခေါင်းလေးကို ကိုင်ဆုပ်ထားပြီး ပါးစပ်ထဲကို တစွပ်စွပ်နဲ့ ထိုးညှောင့်နေတဲ့ တိုးလုံရှိန်သည် ရဲစခန်းထဲမှာ မို့ မိသုန်ကို မလိုးတော့ဘဲ နောက်မှ ဟိုတယ် တခုကို ခေါ်ပြီး လိုးမည် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်း မိသုန် ပါးစပ်ထဲမှာ ဘဲ သုတ်ရည်တွေ ထုတ်လွှတ်ထည့်လိုက်ပြီး “ ပြီး ” ပစ်လိုက်သည် ။ “ အားးးးးးယယယားးးးးးးးကောင်း…..ကောင်းးးးးးလိုက်ထာ……..ဝိုး……အူး……ပြီး။